Bhuku Rekutanga raSamueri 10:1-27
Sauro anozodzwa kuva mambo (1-16)
Sauro anomiswa pamberi pevanhu (17-27)
10 Samueri akabva atora kamudziyo kemafuta,* akaadira mumusoro maSauro.+ Akamutsvoda, akati: “Jehovha haana kukuzodza kuti uve mutungamiriri+ wenhaka yake here?+ 2 Pauchabva kwandiri nhasi, uchawana varume vaviri pedyo neguva raRakeri+ munharaunda yaBhenjamini paZeriza, uye vachati kwauri, ‘Madhongi awakanga waenda kunotsvaga akawanikwa, asi iye zvino baba vako vatokanganwa nezvemadhongi+ acho, uye vava kunetseka nezvenyu. Vari kuti: “Ndichaita sei mwanakomana wangu zvaasina kudzoka?”’ 3 Pfuurira kubva ipapo kusvikira wasvika pamuti mukuru weTabhori, uye pamuti iwoyo uchasangana nevarume vatatu vanenge vachikwidza kuna Mwari wechokwadi kuBheteri,+ mumwe anenge akatakura mbudzi diki nhatu, mumwe akatakura zvingwa zvitatu uye mumwe akatakura chirongo chihombe chewaini. 4 Vachabvunza kuti wakadii vokupa zvingwa zviviri, uye unofanira kugamuchira zvingwa zvacho. 5 Pashure paizvozvo uchasvika pachikomo chaMwari wechokwadi, pane varwi vevaFiristiya. Pauchasvika kuguta, uchasangana neboka revaprofita richiburuka kubva panzvimbo yakakwirira, uye mberi kwavo kuchange kuchiridzwa chiridzwa chine tambo netambureni nenyere nerudimbwa, ivo vachiprofita. 6 Mweya waJehovha uchakupa simba,+ uye uchaprofita pamwe chete navo wochinjwa kuva mumwe munhu.+ 7 Zviratidzo izvi pazvinenge zvaitika, ita chero zvaunokwanisa kuita, nekuti Mwari wechokwadi anewe. 8 Dzika utungamire kuGirigari,+ uye ini ndichauya kwauri ikoko kuti ndipe zvibayiro zvinopiswa, nezvibayiro zverugare. Urambe wakamirira kwemazuva 7 kusvikira ndauya kwauri. Uye ndichakuudza zvaunofanira kuita.” 9 Sauro paakangofuratira kuti abve pana Samueri, Mwari akatanga kuchinja mwoyo wake kuti uite sewemumwe munhu uye zviratidzo zvese izvi zvakaitika zuva iroro. 10 Saka vakabva ipapo vakaenda kuchikomo chacho, uye akasangana neboka revaprofita. Mweya waMwari wakabva wangomupa simba,+ akatanga kuprofita+ pakati pavo. 11 Vese vaimuziva pavakamuona achiprofita pamwe chete nevaprofita, vakataurirana vachiti: “Chii chaitika kumwanakomana waKishi? Sauro mumwe wevaprofita here?” 12 Mumwe murume weikoko akabva ati: “Baba vavo vanombova ani chaizvo?” Saka chakabva chava chirevo chekuti: “Sauro mumwe wevaprofita here?”+ 13 Paakapedza kuprofita, akaenda kunzvimbo yakakwirira. 14 Hama yababa vaSauro yakazoti kwaari nekumushandi wake: “Makanga maenda kupi?” Iye akabva ati: “Kunotsvaga madhongi,+ asi takaashaya, saka takaenda kuna Samueri.” 15 Hama yababa vaSauro yakabvunza kuti: “Ndapota ndiudzei, Samueri akakuudzai kuti chii?” 16 Sauro akapindura hama yababa vake achiti: “Akatiudza kuti madhongi akanga atowanikwa kare.” Asi Sauro haana kumuudza nyaya yeumambo yakanga yataurwa naSamueri. 17 Samueri akabva aunganidza vanhu pamberi paJehovha kuMizpa+ 18 akati kuvaIsraeri: “Izvi ndizvo zviri kutaurwa naJehovha Mwari waIsraeri: ‘Ndini ndakabudisa vaIsraeri muIjipiti uye ndini ndakakununurai paruoko rweIjipiti+ neparuoko rweumambo hwese hwakanga huchikudzvinyirirai. 19 Asi nhasi uno maramba Mwari wenyu+ uyo akakuponesai pamatambudziko enyu ese nepanhamo dzenyu dzese, uye makati: “Aiwa, gadzai mambo kuti atitonge.” Saka mirai pamberi paJehovha maererano nemadzinza enyu uye maererano nezviuru zvenyu.’”* 20 Saka Samueri akaita kuti madzinza ese aIsraeri auye pedyo,+ uye dzinza raBhenjamini ndiro rakasarudzwa.+ 21 Akabva aita kuti dzinza raBhenjamini riuye pedyo maererano nemhuri dzaro, uye mhuri yevaMatiri yakasarudzwa. Sauro mwanakomana waKishi ndiye akazosarudzwa.+ Asi pavakamutsvaga, havana kumuwana. 22 Saka vakabvunza Jehovha+ vachiti: “Murume wacho ati asvika kuno here?” Jehovha akapindura kuti: “Uyo ari apo, akahwanda pakati penhumbi.” 23 Vakabva vamhanya vakanomutora ipapo. Paakamira pakati pevanhu, akanga akareba kupfuura vanhu vese.*+ 24 Samueri akati kuvanhu vese: “Muri kuona here munhu asarudzwa naJehovha,+ kuti hapana akafanana naye pakati pevanhu vese?” Vanhu vese vakatanga kushevedzera vachiti: “Mambo ngaarambe achirarama!” 25 Samueri akaudza vanhu zvavaifanira kuzoitira madzimambo+ uye akazvinyora mubhuku akariisa pamberi paJehovha. Samueri akabva arega vanhu vese vachienda, mumwe nemumwe kumba kwake. 26 Sauro akaendawo kumba kwake kuGibhiya, aine varwi vakanga vabayiwa mwoyo naJehovha. 27 Asi vamwe varume vakaipa vakati: “Munhu uyu angatiponesa sei?”+ Saka vakamuzvidza, uye havana kana chipo chavakamupa.+ Asi iye haana zvaakataura.*
^ Kana kuti “chinu chemafuta.”
^ Kana kuti “maererano nemhuri dzenyu.”
^ Kana kuti “kubva pamapfudzi ake zvichikwira akanga akareba kupfuura vanhu vese.”
^ ChiHeb., “Uye akanga akaita semunhu asingatauri.”